I-Froala: Thuthukisa Ipulatifomu Yakho Ngomhleli Wombhalo Ogcwele we-WYSIWYG | Martech Zone
I-Froala: Thuthukisa Ipulatifomu Yakho Ngomhleli Wombhalo Ogcwele we-WYSIWYG
ULwesihlanu, February 19, 2021 ULwesihlanu, February 19, 2021 Douglas Karr
Uma wake waqala phansi umgwaqo wokwenza ipulatifomu lapho udinga khona isihleli sombhalo esiyikho-okubonayo-ukuthi-uthola ini (I-WYSISYG), uyazi ukuthi kungaba nzima kanjani. Lapho ngisebenza kumhlinzeki wesevisi ye-imeyili, umsebenzi wokuthuthukisa nokuhlola isihleli esasisebenza ukunikeza i-imeyili ephendulayo, yeklayenti le-HTML yathatha abathuthukisi ukukhishwa okuningana ukuze bakulungise futhi balungise. Akulula.
Isihleli sombhalo singesinye salezi zinto ongathanda ukusifaka kupulatifomu ethuthukisa kakhulu okuqukethwe okuthathiwe, kepha akufanele kudinge izinyanga noma iminyaka yentuthuko. Umhleli weFroala isihleli sombhalo esivuthayo esisheshayo esilula, esakhiwe kahle, esivikelekile, futhi okulula ukuthi iqembu lakho lokuthuthuka lihlangane nakho konke izinhlaka ezidumile.
Izici ze-Froala Editor Design
Umklamo Wanamuhla - isikhombimsebenzisi esihle sanamuhla abasebenzisi abazosithanda nje.
URetina Ilungile - Imininingwane eminingi, i-aesthetics engcono namafonti abukhali.
Iculo ishosha esihlatshelelwayo - Sebenzisa okuzenzakalelayo noma itimu emnyama, noma yakha itimu yakho usebenzisa ifayili yetimu ENCANE.
Isikhombi Sokungena - Umhleli wombhalo ocebile we-Froala unikeza ukusebenza okuphelele ngokusebenzisa isikhombimsebenzisi esibonakalayo enabasebenzisi abazothola imvelo ukusisebenzisa.
izigelekeqe - ama-popups amasha, anesitayela womuzwa omangalisayo womsebenzisi.
Izithonjana ze-SVG - Izithonjana ze-SVG ezisendlini, izithonjana ezi-scalable vectorial ezibukeka zihle nganoma yisiphi isayizi.
Isitayela Sakho - Isihleli se-WYSIWYG HTML ukuphela kwaso esinethuluzi elikhethekile lokushintsha ukubukeka nokuzizwa ngendlela ofuna ngayo.
Ibha yamathuluzi ngokwezifiso - Izinkinobho eziningi kakhulu? Mhlawumbe hhayi ngendlela efanele? Unokulawula okugcwele kokusebenza kwebar yamathuluzi kusayizi ngamunye wesikrini.
Ngokwezifiso Yonke Indlela - Konke kungenziwa ngezifiso noma kwenziwe ngezifiso: izinkinobho, okwehliswayo, okuzivelelayo, izithonjana, izinqamuleli.
Ibha yamathuluzi enamathelayo - Ukwenza lula isipiliyoni sakho sokuhlela ibha lamathuluzi lomhleli we-WYSIWYG lizohlala phezulu kwesikrini ngenkathi uskrolela phansi.
I-Offset yebha yamathuluzi - Ibha lamathuluzi lomhleli wombhalo ocebile akudingeki ligqagane nonhlokweni ekhasini lakho lewebhu, vele ulisethele i-offset.
Ibha lamathuluzi Ngezansi - Shintsha kalula indawo yamathuluzi wokuhlela we-WYSIWYG HTML kusuka phezulu kuye phansi, ngenkathi usebenzisa ibha yamathuluzi enamathelayo noma i-offset.
Isikrini esigcwele - Ukubhekana nenani elikhulu lokuqukethwe kudinga isikhala esikhulu sokuhlela. Inkinobho yesikrini esigcwele izokwandisa indawo yokuhlela kuyo yonke indawo yekhasi lewebhu.
Ikhasi eligcwele - Ukubhala nokuhlela lonke ikhasi le-HTML kungenzeka. Kuyasiza kuma-imeyili, kepha hhayi kuphela, ukusetshenziswa kwe-HTML, i-HEAD, amathegi WOMZIMBA nesimemezelo se-DOCTYPE kuvunyelwe.
Iframe - Okuqukethwe komhleli we-WYSIWYG HTML kungahlukaniswa ekhasini lonke kusetshenziswa iframe ngakho-ke azikho izingxabano zesitayela noma zeskripthi.
Izici Zokusebenza Zomhleli we-Froala
fast - Ishesha ngokuphindwe kayisithupha kunokucwayiza kweso, umhleli wombhalo ocebile uzoqala ngaphansi kwama-40ms.
Okulula - Ngomgogodla wayo ogobile we-50KB kuphela, ungaletha isipiliyoni esimangalisayo sokuhlela kuhlelo lwakho lokusebenza ngaphandle kokulahlekelwa isivinini sokulayisha.
I-Plugin Isekelwe - Isakhiwo se-modular senza ukuthi isihleli se-WYSIWYG HTML sisebenze kangcono, kube lula ukusiqonda, sandise futhi sigcine.
Abahleli Abaningi ekhasini - Abahleli bombhalo oyedwa noma abayishumi ekhasini elifanayo? Ngeke uzwe umehluko, vele usethe ukuthi uqaliswe ngokuchofoza.
I-HTML 5 - I-Froala Rich Text Editor yakhiwe ngokuhlonipha nangokusebenzisa izindinganiso ze-HTML 5.
I-CSS3 - Iyiphi indlela engcono yokwenza ngcono ulwazi lomsebenzisi kunokusebenzisa i-CSS3? Imiphumela ecashile yenza umhleli abe mkhulu kakhulu.
Izici ze-Froala Editor Mobile
I-Android ne-iOS - Amadivayisi we-Android ne-iOS ahlolwe futhi asekelwa.
Khulisa kabusha isithombe - I-Froala Rich Text Editor iyisihleli sokuqala se-WYSIWYG HTML esinosayizi wesithombe osebenza ngisho nakumadivayisi eselula.
Usayizi Wevidiyo - owokuqala ukwethula usayizi wamavidiyo noma edlala. Futhi-ke, kusebenza nakuselula.
Isabele Design - Okuqukethwe okuhlelayo kuzophendula. Isihleli sabo se-WYSIWYG HTML singaphatha usayizi wesithombe sisebenzisa amaphesenti.
Ithulibha ngosayizi wesikrini - Ngokokuqala ngqa kusihleli sombhalo ocebile, ibha yamathuluzi ingenziwa ngezifiso ngosayizi ngamunye wesikrini.
Izici ze-Froala Editor SEO
Hlanza i-HTML - UFroala wenza i-algorithm ehlanza ngokuzenzakalela ukukhishwa kwe-HTML komhleli wabo wombhalo ocebile. Bhala ngaphandle kokukhathazeka, umhleli we-WYSIWYG HTML ukhiqiza umphumela ohlanzekile kakhulu, olinde ukukhashelwa yizinjini zokusesha.
Ukusekelwa kwesithombe se-Alt Alt - Okunye okuhlukile kwesithombe ngumbhalo okhonjisiwe uma isiphequluli singakwazi ukubonisa isithombe. Futhi ngumbhalo osetshenziswa izinjini zokusesha, ngakho-ke ungawuzibi. Umbhalo ohlukile ungasethwa kokuzivelelayo kwesithombe okuhleliwe.
Xhuma Isihloko Sokuxhaswa Kwethegi - Yize isihloko sesixhumanisi singaziwa ukuthi sinomthelela omkhulu we-SEO, sisiza abasebenzisi ukuthi bahambe kalula ngewebhusayithi yakho. Akubalulekile kangako, kepha kuhle ukuba nakho. Setha isihloko sesixhumanisi kokuzivelelayo kwesixhumanisi.
Izici zokuphepha ze-Froala Editor
I-Froala WYSIWYG HTML Editor inendlela enamandla yokuzivikela ekuhlaselweni kwe-XSS. Ezimweni eziningi, ngeke kudingeke ukhathazeke ngalokhu, kepha sisancoma ukuthi wenze amasheke angeziwe kuseva yakho.
Kanye nokuxhasa zonke izici ze-HTML, umhleli uhunyushelwa ezilimini ezihlukene ezingama-34, unokwesekwa kwe-RTL ngokutholwa okuzenzakalelayo, neSpell Check.
UFroala unayo i- I-plugin ye-WordPress ukuhlanganisa isihleli kusayithi lakho le-WordPress.
Zama i-Froala's Online HTML Editor Thwebula Froala
Tags: umhleliumhleli osheshayohtml umhleliumhleli wombhalo ocebileumhleli wombhaloumhleli we-wordpressumabhebhanaumhleli we-wyswyg